भेन्टिलेटरमा पुगेका ३० मा २६ जनाको मृत्यु – sunpani.com
शनिबार, कार्तिक ६, २०७८
भेन्टिलेटरमा पुगेका ३० मा २६ जनाको मृत्यु
सुनपानी । १२ मंसिर २०७७, शुक्रबार मा प्रकाशित
आइसोलेसन युनिटमा उपचार गराइरहेका बिरामी ।
नेपालगञ्ज – कोरोना संक्रमित भेन्टिलेटरमा पुगेपछि फर्किने संभावना न्यून देखिएको छ । नेपालगञ्जको भेरी अस्पताल र कोहलपुर मेडिकल कलेजको भेन्टिलेटरमा पुगेका ३० जनामध्ये २६ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांकले यस्तो देखाएको छ ।
जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र, बाँकेका फोकलपर्सन नरेश श्रेष्ठका अनुसार, भेरीमा अस्पतालमा ११ र मेडिकल कलेज कोहलपुरमा १९ जनालाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो । त्यसमा भेरीमा एक र कोहलपुर मेडिकल कलेजमा तीन जनामात्रै बाँच्न सफल भए ।
भेरी अस्पताल, नेपालगञ्जका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट (मेसु) डा. प्रकाश थापाले ‘कोरोना संक्रमितको हकमा भेन्टिलेटरमा पुगेपछि बचाउन गाह्रो भइरहेको बताउनुभयो । मेसु डा. थापाले भन्नुभयो, ‘अरु बिरामीको फोक्सो राम्रो हुन्छ र फर्किन्छ । कोरोनाले फोक्सोमा असर गर्ने भएकाले भेन्टिलेटरमा पुगेकालाई बचाउन गाह्रो हुने गरेको छ । कोरोना संक्रमित भेन्टिलेटरमा पुगेको छ भने ४÷५ प्रतिशतमात्रै फर्किन्छ ।’
बाँकेमा अहिले तीन जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् । कोरोनाका सिकिस्त बिरामी ३९ जना रहेका छन्, भेरीमा २६ र कोहलपुरमा १३ जना । सबै सिकिस्त बिरामी भेन्टिलेटरमा लैजानु पर्दैन । जसको फोक्सो र मुटुले काम गर्न छोड्छ, उसलाई भेन्टिलेटरमा लगिन्छ । मेसिनबाट फोक्सो र मुटुलाई चलाइन्छ ।
बाँकेमा ४२ जना मध्यम खालका बिरामी छन् । भेरीमा २७ र कोहलपुरमा १५ जनाले उपचार सेवा लिइरहेका छन् । सामान्य खालका ६ जना कोहलपुर मेडिकल कलेजमा छन् ।
लक्षण चिन्ह नदेखिएका कोरोना संक्रमितहरु घरमै बस्ने गरेका छन् । यो संख्या अस्पतालमा भन्दा धेरै रहेको छ । फोकलपर्सन श्रेष्ठका अनुसार, बाँकेमा एक सय २७ जना होम आइसोलेसनमा बसेका छन् । त्यसमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका ५३, कोहलपुर नगरपालिका ४४, खजुरा गाउँपालिकामा ९, बैजनाथमा ५, जानकीमा ४, राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा १२ जना रहेका छन् । डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा होम आइसोलेसनमा कोही पनि छैनन् ।
बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट ८८ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसमा बाँकेका ३८ र बाहिरी जिल्लाका ५० जना रहेका छन् ।
बाँकेमा तीन हजार ८ सय २४ जना कोरोना संक्रमित भएका छन् । त्यसमध्येमा तीन हजार ५ सय ८७ जना निको भएर घर गएका छन् । एक सय ९९ जना अहिले आइसोलेसनमा रहेका छन् ।
खजुराका सबै वडामा सर्वसम्मत
सात जना संक्रमित थपिए
कुकाठ झिकेर रुख रोप्ने वनमन्त्री हमालको भनाई
बाछी मारेर भाग्यो स्कारपियो
बाढी तथा डुबान पीडित सडकमा रात बिताउँदै
सात जना थपिए, सातै जना निको भए
डुडुवामा जेष्ठ नागरिकलाई घरमै उपचार
मन्त्री हमाललाई सम्मानै–सम्मान
एन.पि.जे. मिडिया प्रालीद्वारा प्रकाशित
नेपालगञ्ज–१८, कारकादो, बाँके
सम्पादक : केशवराज कोइराला
फोन नः ९८५८०२४२७१, ९८००५४१७७७
सूचना विभाग दर्ता नं. १८२५/०७६–७७
© 2020 All Right Reserved. sunpani
error: यो सुविधा उपलब्ध छैन !